Nabata na klas nke 2016 Grands Crus nke Saint Emilion
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Nabata na klas nke 2016 Grands Crus nke Saint Emilion
Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
by Dr. Elinor Garely - pụrụ iche na eTN na nchịkọta akụkọ na isi, wines.travel
dere Dr. Elinor Garely - pụrụ iche na eTN na nchịkọta akụkọ na isi, wines.travel
Louis nke Iri na Anọ kwanyere mmanya ndị dị na Saint Emilion ụgwọ - na-akpọsa “Saint Emilion, mmiri ozuzo nke chi.”
E tinyeghị mmanya Emilion Grand Crus na nke mbụ 1855 Bordeaux nke mere e guzobere Association de Grands Crus Classes de Saint Emilion na 1982 iji kwalite ogo na oke mma nke mmanya na mpaghara a. Ugbu a enwere 49 Chateaux n'ime otu na-anọchite mkpokọta mmepụta ihe dị ka 800 ha na 85 pasent nke ubi vaịn Grands Crus.
Ubi vaịn ndị a na-anọchite anya ihe ndị kachasị mma okwu nke Merlot mmanya ndị toro eto na-eto eto na ala dị iche iche dị n'akụkụ ugwu okwute na ala ugwu na-agagharị na obere ugwu nke Saint Emilion, saịtị UNESCO World Heritage.
Syndicat Viticole na-eme atụmatụ maka nhazi ọkwa nke Saint Emilion malitere na 1930; agbanyeghị, ọ bụ rue Ọktọba 1954 ka ụkpụrụ ndị malitere ntọala nke ọkwa ahụ bụ nke gọọmentị na French National Institute of Appellations (INAO) kwenyere iburu ibu ọrụ maka ịhazi ọkwa ahụ. Ndepụta mbụ ahụ gụnyere 12 Premier Grands crus na 63 Grand crus.
A na - emelite ndepụta Saint Emilion kwa afọ 10, n’adịghị ka Bordeaux Wine Official Classification nke 1855 na - ekpuchi mmanya sitere na mpaghara Medoc na Graves. Mmelite kachasị ọhụrụ maka St Emilion bụ 2006 - mana ekwuputara na ọ baghị uru ma weghachite nsụgharị nke 1996 maka nhazi nke 2006 ruo 2009.
Ajụ ọkwa 2006 nke Saint Emilion mmanya n'ihi na 15 Premiers Grands crus na 46 Grands crus ka ndị na-emepụta afọ anọ enweghị afọ ojuju mara aka - ewepụla ha n'ọkwa; nsonaazụ ya - akọwapụtara 4 wee weghachi ọkwa 2006. Ntọala maka esemokwu ahụ dabere n'eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị otu kọmitii metụtara ịtụle mmanya ahụ metụtara ọdịmma (yabụ, ndị négociants nwere mmekọrịta azụmahịa na ụfọdụ ndị chateaux), ma na-enyo enyo na ha anaghị ele mmadụ anya n'ihu. Gụọ akụkọ zuru ezu na wines.travel.
Dr. Elinor Garely - pụrụ iche na eTN na nchịkọta akụkọ na isi, wines.travel
Conlọ Ọrụ Mgbakọ Russia na-ekwupụta ọkwa ọhụrụ